Soo dejisan B612 4.7.2 – Vessoft
Soo dejisan B612
B612 – software ah si ay u abuuraan dhigay sawir oo gaaban videos. Software ayaa u saamaxaaya in ay isticmaalaan wax badan oo ka mid ah sida diirada kala duwan iyo saamaynta graphic in bedeli kartaa muuqaalka kore ee wax sawiro. B612 kuu ogolaanaya in aad ku soo gani video gaaban, darto saamaynta codka iyaga, diinta u-animation GIF iyo naadiya internet-ka. Software taageertaa kamaradaha hore iyo gadaal ah ay hindiseen. B612 ku jira ka dhisay-in saacad la auto bilowga sharciyeynta madax banaan oo waqti sii daayo shutter ee camera ah. Sidoo kale software xusa in la door user iyo waxay bixisaa inta badan la isticmaalo sida diirada.
Samee dhigay sawir iyo videos is-toogtay
Tiro badan oo ka mid ah sida diirada iyo saamaynta graphic
Taageerada camera danbe
Settings ee saacadda
B612 Software la xiriira:
English, Español, Português, Italiano... Duolingo 3.23
English, Français, Deutsch, Русский... Skype 6.2.0.17000